Izindaba - Umkhiqizo Ibhulogi: Ungayelula kanjani impilo yesevisi yokuphakamisa indwayimane
Ngokusetshenziswa okujwayelekile, uma ubuso bendwayimane bonakele, abuzukuthinta ukusebenza kahle kuphela, kepha futhi buzoletha nezingozi ezithile zokuphepha. Ngakho-ke, ngesikhathi sokusebenzisa indwayimane, abasebenzi abangochwepheshe kumeleyenza ukuhlolwa okufanele. Lapho nje ukuklwebheka noma ukugqoka komhlaba sekutholakele, kudinga ukulungiswa ngesikhathi. Indwayimane esezingeni elifanele inempilo ende yokusebenza, kepha uma umsebenzisi engasebenzi kahle, kungadala ukusonteka noma ukugqoka ebusweni bendwayimane.
1. Kumele kube njalo igcinwe ngochwepheshe. Ngemuva kokusetshenziswa, kufanele ibekwe eshalofini lobuchwepheshe esikhundleni sokuphola. Imvelo kufanele ihlanzeke futhi ibe nomoya.
2. Yenza umsebenzi omuhle ekuvikeleni ukugqwala. Uma indwayimane ibekwa endaweni enomswakama isikhathi eside, kulula kakhulu ukudala ukugqwala ngaphezulu. Lapho ugcina indwayimane,ukuvikela ukugqwalakufanele kuthathwe izinyathelo. Ngaphezu kwalokho, indwayimane ayikwazi ukubekwa endaweni eshisa kakhulu.
3. Isikhathi eside, kuzoba nothuli namanye amabala kawoyela. Ngakho-ke, abasebenzisi badingahlanza imikhiqizo njalo. Lapho ubhekene namabala kawoyela angenakusulwa ahlanzeke, kufanele kusetshenziswe izinto ezikhethekile zokuhlanza. Ngaphezu kokuhlanza, kuyadingeka futhi ukufaka uwoyela wokugcoba njalo ukunciphisa ukungqubuzana ngesikhathi sokusebenza.
Uma kwenzeka ukuthi indwayimane yakho inezinkinga ezilandelayo, sicela uyeke ukuzisebenzisa.